काठमाडौं – लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल छोरीका बाबु बनेका छन् । आफ्ना फ्यान तथा शुभचिन्तकहरुलार्य आँफु बाबु बनेको जानकारी दिँदै उनले लेखेका छन् घरमा लक्ष्मीको आगमन । – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौं – लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल छोरीका बाबु बनेका छन् । आफ्ना फ्यान तथा शुभचिन्तकहरुलार्य आँफु बाबु बनेको जानकारी दिँदै उनले लेखेका छन् घरमा लक्ष्मीको आगमन ।
काठमाडौं – लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल छोरीका बाबु बनेका छन् । आफ्ना फ्यान तथा शुभचिन्तकहरुलार्य आँफु बाबु बनेको जानकारी दिँदै उनले लेखेका छन् घरमा लक्ष्मीको आगमन ।
काठमाडौं – लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल छोरीका बाबु बनेका छन् । आफ्ना फ्यान तथा शुभचिन्तकहरुलार्य आँफु बाबु बनेको जानकारी दिँदै उनले लेखेका छन् घरमा # लक्ष्मी को आगमन ।
काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ४७ पुगेको छ । बुधबार थप २१ जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै गण्डकीमा संक्रमितको संख्या २ सय ४७ पुगेको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका निर्देशक तथा गण्डकी प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।
बुधबार नवलपरासी पूर्वका १८ जना र पर्वतका ३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका १८ देखि ३६ वर्ष उमेरसमूहका १४ जना पुरुष, मध्यविन्दु नगरपालिकाका २ जना पुरुष, कावासोती नगरपालिकाका एक जना पुरुष र पालिका नखुलेका एक जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
त्यसैगरी पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका २ जना पुरुष र एक जना महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो । संक्रमितहरु सबै भारतबाट फर्किएको र उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको आइसोलेसनमा लगिएको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।
फेरि २५ दिन सम्पुर्ण बजार,यातायात बन्द रहने गरिने, भर्खरै भयो यस्तो निर्णय !
काभ्रेपलाञ्चोकमा टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु